Madaxweynaha Kazakhstan: Ciidamadu Toogasho ha ku Dilaan Dibad-baxayaasha
Madaxweynaha Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev
Madaxweynaha Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ayaa Jimcihii amray ciidamada ammaanka in ay toogan karaan islamarkaana dili karaan mudaaharaadayaasha, taasi oo timid ka dib toddobaad rabshado ah oo hareeyay dalkan ku yaalla bartamaha Asia.
Madaxweynaha ayaa khudbad uu jeediyay ku yiri “argagixisadu waxa ay sii wadaan waxyeelada ay u geysanayaan hantida dowladda iyo tan gaarka loo leeyahay, waxayna hub u adeegsanayaan dadka rayidka ah. Waxaan amar ku siiyay hay’adaha ammaanka in ay toogtaan oo ay dilaan iyadoo aan la siinin diginin.”
Khudbadda ayuu Tokayev ku diiday baaqa beesha caalamka ee ah in dowladdiisu ay wada xaajood la furto kooxaha mudaaharaadaya. Waxa uuna sii waday, isaga oo aan caddeymo keenin, sheegashada ah in kuwa mudaaharaadaya uu dal shisheeye soo tababaray soona abaabulay.
Waxa uu ku tilmaamay dibadbaxayaashu in ay yihiin burcad iyo argagixiso ay waajib tahay in la burburiyo, isaga oo ballan qaaday in sidaasi la sameyn doono dhowaan.
Sidoo kale waxa uu u mahadceliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo si degdeg ah ciidamo ugu soo diray ka dib codsi kaga yimid Tokayev, si ay ciidamadaasi gacan uga geystaan xakamaynta mudaaharaadyada.
Dhinaca kale, maamulka Kazakhstan ayaa xiray Karim Massimov, oo ahaa madaxii hore ee guddiga amniga qaranka, kaasi oo shaqada laga eryay horraantii toddobaadkan, xilli ay dibadbaxyadu ka socdaan dalka oo dhan. Waxa loo haystaa eedo ah khiyaamo qaran.
Mudaaharaadyo ayaa dabayaaqadii todobaadkii hore ka billowday Kazakhstan, kuwaasi oo ka dhashay qiimaha shidaalka oo sare u kacay, waxa ayna isu beddeleen rabshado xooggan.
Hogaamiyayaasha dalalka ka baxsan gobolka ayaa Jimcihii ka hadlay waxyaabaha ka socda dalkaasi.
Xoghaya Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu “si aad ah uga walaacsan yahay” xaaladda degdegga ah ee Kazakhstan.
“Waxaan xaaladda ula soconeynaa si dhab ah, waxa aanna ku dhiirri-gelinaynaa cid walba in la helo xal nabadeed," ayuu yiri.
Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa Jimcihii oggolaatay in ay soo bixi karaan shaqaalaha dowladda ee aan muhiimka aheyn ee ka howlgala qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada ugu weyn Kazakhstan ee Almaty.